Posted by KoKyawZwa at 6:13 AM3comments: Links to this post
ယနေ. Chile နိုင်ငံ တစ်ခုလုံး အောင်ပွဲခံသည်။ Chile နိုင်ငံ၏ အောင်ပွဲကို တစ်ကမ္ဘာလုံး စောင့်ကြည့် မုဒိတာ ပွားကြသည်။ မြေအောက်၌ နှစ်လကျော် ပိတ်မိနေသော မိုင်းတွင်းလုပ်သားများ မြေပြင်ပေါ်သို. ချောချောမွေ.မွေ. ပြန်ရောက်သောနေ. ဖြစ်သဖြင့် ၄င်းတို.အဖို. မင်္ဂလာရှိသော နေ.တစ်နေ. ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခံ မိသားစုများ၏ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှု အပျော်ကို တွေ.မြင်ရသူများလည်း မျှဝေခံစားနိုင်ကြလေသည်။
အပျော်ဖုံးသောစိတ်ဖြင့် သတင်းများ၊ ရုပ်ပုံများကို ကြည့်ရင်းက အတွေးနယ် ချဲ.မိသည်။ တွေးရင်းက ဆင်ခြင်စရာ အလားတူ ဖြစ်ရပ်များ ခေါင်းထဲသို. ၀င်လာ၍ ဤစာစုကို ရေးပါ၏။ ဖတ်ရှု သုံးသပ် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်တော်မူကြပါကုန်။
အီရတ်စစ်ပွဲကာလက ဖြစ်ပါသည်။ ဘဂ္ဂဒက်မြို. ကျပြီးသော်လည်း အမေရိကန်တပ်တို. အုပ်ချုပ်ရေးတွင် မစိုးမိုးနိုင်သေး။ မြေပြင်တိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲနေရသေးသည်။ စစ်အပြင်းတိုက်ရင်း အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တယားကို အမြန်တည်ဆောက်နေရသည့် ကာလ ဖြစ်သည်။ အိမ်ရှင်တို.၏ ပြန်လည်တုံ.ပြန်မှုကလဲ ပြင်းထန်လှသည်။ အီရတ်ပြောက်ကျားများဖက်က ဖမ်းဆီးရမိသွားသော ဓားစာခံများ အရှင်ပြန်လွတ်သည်ဟူ၍ မရှိပေ။ ထိုသို. ဆိုးဝါးလှသော အခြေအနေတွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် နိုင်ငံရေး အနေအထားတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ကုမ္မဏီအတွက် အီရတ်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား ထရပ်ကားမောင်းသူ အရပ်သား တစ်ဦးအား ဆက်ဒမ်ဟူစိန် ထောက်ခံသူ ပြောက်ကျားများက ပြန်ပေးဆွဲ ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်က ဖိလစ်ပိုင်သည် အမေရိကန်၏ အမာခံ မဟာမိတ်ပီပီ အီရတ်စစ်ပွဲကို ထောက်ခံခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို အီရတ်စစ်ပွဲအတွက် စေလွှတ်ထားခဲ့သည်။ ထိုတပ်သားအားလုံးကို အီရတ်မှ ပြန်ရုတ်သိမ်းရန် ပြန်ပေးဆွဲသူများက တောင်းဆိုခဲ့ကြ၏။
ပြန်ပေးဆွဲခံရသော ထိုထရပ်ကား ဒရိုင်ဘာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အများအပြားက အသေဟုသာ တွက်ထားလိုက်ကြသည်။ နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု စစ်ဖြစ်ချိန်တွင် နိုင်ငံသားတစ်ဦး အသက်စွန်.သွားရခြင်းက အဘယ်မျှလောက် အရေးကြီးပါသနည်း။ အစိုးရတစ်ရပ်၏ပေါ်လစီနှင့် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏အသက် ဘယ်အရာက ပိုအရေးကြီးပါသနည်း။ ထိုအချိန်က အမေရိကန်တပ်သား အတော်များများပင် အီရတ်တွင် ခေါင်းဖြတ်ခံရပြီး ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ အာရိုယိုနှင့် သူမ၏ ကက်ဘိနက်အတွက် အတော်ပင် ခေါင်းခြောက်ရသည့်ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။
လူအများ ထင်မထားသည့် ကိစ္စများ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။
ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရသည် အီရတ်သို. စေလွှတ်ထားသော ဖိလစ်ပိုင်တပ်အားလုံးကို ပြန်လည်ခေါ်ယူပြီး
မိမိနိုင်ငံသား ထရပ်ကားဒရိုင်ဘာ၏ အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရေးကို ရွေးချယ်ခဲ့လေသည်။
နိုင်ငံတကာ သံတမန်လောက (အထူးသဖြင့် အနောက်ကမ္ဘာ) တွင် ထိုဖြစ်ရပ် အလွန်ပင် ပွက်လောရိုက်သွားလေ၏။ အကြမ်းဖက်သမားများကို အလျှော့ပေးသူ၊ ရန်သူနှင့် အပေးအယူလုပ်သူဟု ၀ါရှင်တန်က ဝေဖန်သည်။ အာရိုယိုကမူ သူမ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် လုံးဝနောင်တမရကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
အင်တာဗျုးတစ်ခုတွင် သူမပြောခဲ့သည်က ရှင်းသည်။
ထိုထရပ်ကားဒရိုင်ဘာသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကို အဓိက ကျားကန်ပေးထားသော နိုင်ငံတကာရောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား အလုပ်သမားများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထိုကဲ့သို.သော အခွန်ထမ်းပြည်သူများအား အစိုးရက မည်မျှ တန်ဖိုးထားသည်ကို ယခုလုပ်ရပ်ဖြင့် ပြသခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောခဲ့ပါသည်။ ဖိလစ်ပိုင် တစ်နိုင်ငံလုံး လက်ခုပ်တီးကြလေသည်။ ဖိလစ်ပိုင် အတိုက်အခံတို. ဘာပြောနိုင်မည်နည်း ??? မည်သူက ဝေဖန်နိုင်မည်နည်း ???
တစ်ခါက ဖိလစ်ပိုင် သံတမန်တစ်ဦးနှင့် တွေ.ဆုံရသဖြင့် အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို စကားစပ်ပြီး မေးကြည့်မိဖူးသည်။ သူကတော့ အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်သည် ရေရှည်အတွက်လဲ အကျိုးရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်က အရှေ.အလယ်ပိုင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေသော ဖိလစ်ပိုင်လုပ်သား တစ်သန်းခွဲကို အီရတ်စစ်ပွဲကာလ တစ်လျှောက်လုံး ဘေးကင်းစေခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအချိန်က အီရတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမှာပင် ဖိလစ်ပိုင်လုပ်သား ၄၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရာ ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရ အနေဖြင့် နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမည်မျှ ပိုရမည်ကို ခန်.မှန်းကြည့်နိုင်လေသည်။ အစိုးရနှင့် ပြည်သူကြားမှ WIN-WIN solution ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးများ၏ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာများအပေါ် ဆက်ဆံပုံကို မြင်ရကြားရသည့်အခါတိုင်း ကျနော့်မှာ အီရတ်စစ်မြေပြင်တွင် ထရပ်ကားမောင်းနေသော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများကိုသာ ပြေးမြင်မိပါသည်။
ယခုလဲ ချီလီမိုင်းလုပ်သားအရေး ပေါ်လာပြန်သည်။ လက်ရှိအာဏာရသူအနေဖြင့် ရွေးချယ်ခွင့်/ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိသည့် အခြေအနေတွင် မီဒီယာကိုလည်းကောင်း၊ အခြေအနေကို လည်းကောင်း အကောင်းဆုံး အသုံးချသွားနိုင်ပြီး သူ၏ နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာကို လိမ်မာပါးနပ်စွာ တည်ဆောက်ရင်း၊ ပြည်သူများကို စောင့်ရှောက်သွားနိုင်သည်ကို တွေ.ရပြန်လေသည်။ သမ္မတကိုယ်တိုင် မိုင်းလုပ်သားများအရေးကို အလေးပေးကြောင်း ပြသသည်။ ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီး ကယ်ဆယ်သည်။ မီဒီယာကို အသုံးချပြီး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကို promotion လုပ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်သတင်းလဲ ဖြစ်ခဲ့သည်။အာဏာလက်ကိုင်ထားသူနှင့် အခွန်ထမ်းပြည်သူကြားမှ Another WIN-WIN Solution ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ချီလီမိုင်းလုပ်သားများ မည်သူ.ကို မဲထည့်မည်ဟု စာဖတ်သူ ထင်ပါသနည်း ??? ချီလီမိုင်းတွင်းလုပ်သားများ သတင်းကို စောင့်ကြည့်ရင်း ဖားကန်.တွင် သတင်းကိစ္စဖြင့် ခရီးသွားစဉ်က မြင်တွေ.ခဲ့ရသည့် ဒေသခံစစ်တပ်နှင့် အာဏာပိုင်တို.၏ ကျောက်စိမ်းတွင်း လုပ်သားများအပေါ် ဆက်ဆံပုံများကို ပြန်သတိရမိပါသည်။ ထိုလုပ်သားများကို လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မည်သူ.ကို မဲထည့်မည်နည်းဟု တစ်ဦးချင်း လိုက်မေးလိုက်ချင်သည်။ အစိုးရ၀န်ထမ်းများကိုလဲ ထိုမေးခွန်းကိုသာ မေးချင်နေမိသည်။
အမှန်တော့ (ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြောရပါလျှင်) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များသည် အစိုးရတစ်ရပ်အဖို. နိုင်ငံတော်၏ ဘဏ္ဏာငွေကို သုံးပြီး နာမည်ကောင်းရအောင် ဖန်တီးနိုင်သည့် ဂွင်များဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ လက်ရှိအစိုးရများ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ပါးနပ်လျှင် ပါးနပ်သလောက်၊ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိလျှင် ရှိသလောက်၊ ကိုင်တွယ်တတ်လျှင် တတ်သလောက် အတိုက်အခံများကို နောက်ကောက်ချနိုင်သည့် နိုင်ငံရေး အကွက်ကလေးများ ဖြစ်ပါသည်။
လှိုင်မြို.နယ် ဘာတာမီးလောင်မှု၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း၊ ပဲခူးရေကြီးမှု၊ မင်္ဂလာဈေးမီးလောင်မှု စသည်တို.ကစပြီး ယခုလတ်တလော မန္တလေးရေကြီးမှုအထိ မြန်မာအစိုးရ၏ လုပ်ရပ်များကို သုံးသပ်ကြည့်သောအခါ စေတနာ မရှိသည်လား၊ နိုင်ငံရေးပါး မ၀သည်လား၊ လုပ်နိုင်သည့် အရည်အချင်း အလျဉ်း မရှိသည်လားတော့မသိ။ ယခုတင်ပြခဲ့သည့် အာရိုယိုနှင့် ချီလီသမ္မတတို.လို လုပ်ဆောင်ချက်မျိုး မမြင်ခဲ့ရသည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်စဉ်က စစ်အစိုးရက disaster ကို propaganda အတွက် သုံးလေမည်လားဆိုသည့် စိုးရိမ်မှုဖြင့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ဖူးသည်။ လက်တွေ.တွင် အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ စုဖွဲ.ပြီး ခေါက်ဆွဲထုပ်ဝေသည့် လုပ်ရပ်လောက်ကိုပင် ချက်ချင်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။ ထုံးစံအတိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးအစား အဖုံးအဖိများ၊ အလိမ်အညာများဖြင့်သာ မုန်တိုင်းပြီးစ ကာလများတွင် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့လေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်သွားသော မြေငလျှင်ကိစ္စအား အစ်ကိုတော် ပေါက်ဖော်များက မည်သို.ကိုင်တွယ်သည်ကို မြင်သောအခါတွင်မှ နေပြည်တော် အဲယားကွန်းခန်းထဲမှ ဗိုလ်ချုပ်များ အူယားဖားယားဖြင့် ရဟတ်ယာဉ်များပေါ် ပြေးတက်ကြပါသည်။ အလာကောင်းသော်လည်း အခါနှောင်းလေပြီ။ နာဂစ်တွင် မြန်မာပြည်သူများက စစ်အစိုးရကို တော်တော်လေး ချဉ်သွားခဲ့လေသည်။
အမှန်တော့ ထိုကာလသည် အစိုးရမင်းများအဖို. မိမိလခထဲမှ မပွန်းမပဲ့ဘဲ အစိုးရဘတ်ဂျက်ဖြင့်ပင် အချောင် နာမည်ကောင်းယူနိုင်သည့် အခွင့်အရေး ဖြစ်၏။ ထိုအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည်မှာ စစ်အစိုးရက အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး သက်သေပြခဲ့သော အစိုးရအဖြစ် မထိုက်တန်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသသာ ဖြစ်သည်။ Psychological Warfare မှ လာသော နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖို. ယခုဆွေးနွေးခဲ့သော အချက်များကို မသိဘဲ နေမည်မဟုတ်။ ပြည်သူ.ဒုက္ခ ငါနဲ.မဆိုင်ဟု သဘောထားလိုသောကြောင့်သာ အဓိကဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ကတော့ မြင်မိပါသည်။ အမှန်တကယ်လဲ စေတနာသာ ပဓာနမို. စေတနာကို မရှိလို.ပါဟု သုံးသပ်ရမလိုပင်ဖြစ်သည်။
ပုဂံခေတ်က ကျန်စစ်သားသည်ပင် "ငါ၏ ယာလက်ဖြင့် ဆန်စပါးရိက္ခာကို ပေးအံ့၊ ငါ၏၀ဲလက်ဖြင့် ၀တ်စားတန်ဆာ ပေးအံ့" ဟု ပြောခဲ့ဖူးကြောင်း မှတ်သားခဲ့ရဖူးသည်။ ကျန်စစ်သားမင်းသည် psy-war ကို မသင်ခဲ့ရသော်လည်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် အနေဖြင့် မည်သည့်အလုပ် လုပ်သင့်သည်ကို နားလည်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိခေါင်းဆောင်ကမူ သုံးတန်းဖတ်စာကို ကျေညက်ပါ၏လောဟု သံသယ၀င်ဖွယ် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလဲ မန္တလေးတွင် ရေကြီးနေပြန်သည်။
မြန်မာအစိုးရက ပြည်သူကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို. သဘောထားနိုင်မည့်ကာလကို
မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံးက စောင့်မျှော်နေကြလေသည်။
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀
........... ........... ........
ပုဂံကို ရန်သူတို့ ဖျက်ဆီးသောအခါ အမျိုးလေးပါးသည် စစ်သုံ့ပန်းဖြစ်၍ အချို့ လည်း အောက်အကြေသို့ ပါကြရသည်။
အချို့ လည်း အထက်အညာသို့ ပါကြရသည်။ ငါ၏ အကူအညီဖြင့် ထိုသူတို့ ပုဂံသို့ ပြန်ရောက်စေပါအံ့။
ထိုသူတို့၏ ဒုက္ခကို ငါငြိမ်းပါအံ့။
ထိုသူတို့၏ မျက်ရည်ကို ငါသုတ်ပါအံ့။
ငါ၏ ယာလက်ဖြင့် ဆန်စပါးရိက္ခာကို ပေးအံ့။
ငါ၏၀ဲလက်ဖြင့် ၀တ်စား တန်ဆာ ပေးအံ့။
အမိသည် သားငယ်အား ရင်ခွင်၌ နှစ်သိမ့်သကဲ့သို့ ငါသည်လည်း တိုင်းသူပြည်သားတို့ကို နှစ်သိမ့်ပါအံ့။
၁၁ ရာစု ပုဂံပြည်
Posted by KoKyawZwa at 8:35 AM No comments: Links to this post
“အခုကနေ နောက်ထပ်ဆယ်နှစ်။ နောက်ထပ်အနှစ်နှစ်ဆယ်။ အားလုံးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
ရေနံက ကျုပ်တို.ကို ငါးပါးမှောက်အောင် လုပ်လိမ့်မယ် …
ရေနံဆိုတာ ကမ္ဘာမြေပေါ်ကို မာန်နတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ သူ.ရဲ.ညာလက်ရုံးပဲ။”
အထက်ပါစကားကို ပြောသူမှာ အခြားမဟုတ်။ ရေနံတင်ပို.ရောင်းချသူနိုင်ငံများအသင်း (OPEC) ကို တည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဗင်နီဇွဲလား နိုင်ငံရေးသမား Juan Pablo Perez Alfonzo ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
သဘာဝသယံဇာတကြောင့် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးဖြစ်သောနိုင်ငံ ပိုများသည်ဟူသော အယူအဆကို ပြောနေကြသည်မှာ ၁၉၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်နှစ်များ ကတည်းက ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ် ရောက်လာသောအခါ သယံဇာတက တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို မတိုးတက်စေဘဲ နောက်ပြန်ဆွဲသော အနေအထားကို “သယံဇာတကျိန်စာ (Resource Curse)” ဟု ပညာရှင်အချို.က စတင်သုံးစွဲလာကြပါသည်။ ထိုအကြောင်း လေ့လာကြသော ပညာရှင်အသီးသီး၊ အဖွဲ.အစည်းအသီးသီးတွင် မြန်မာတော်တော်များများ သိကြသည့် Jeffery Sachs လို ဒိတ်ဒိတ်ကျဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုး၊ Global Witness လို လူသူလေးစားသည့် အဖွဲ.အစည်းမျိုး ပါဝင်လေသည်။ အမှန်တော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်မှုနှင့် သယံဇာတကြွယ်ဝမှု လားလားမျှမဆိုင်သည့်အကြောင်း အိုပက်နိုင်ငံများက ၂၀ ရာစု နှောင်းပိုင်းကတည်းက သက်သေပြပြီး ဖြစ်လေသည်။
သယံဇာတ ကြွယ်ဝခြင်းမရှိသော နိုင်ငံများတွင် အစိုးရ၏ အဓိက၀င်ငွေသည် ပြည်သူလူထုထံမှ အခွန်အခ ရငွေဖြစ်သည်။ ပြည်သူ.အခွန်ငွေကို အဓိက မှီခိုရသဖြင့် အစိုးရများက အပြည်အလှန်အားဖြင့် တာဝန်ကျေရန် လိုအပ်လာသည်။ ထိုအနေအထားသည် အချင်းချင်း ထိမ်းညှိနိုင်သော နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို ဖန်တီးပေးသည်။ ထို.ကြောင့် တိုင်းပြည်လဲ တည်ငြိမ်သည်။ သို.သော် အစိုးရတစ်ရပ်သည် သယံဇာတမှ သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင် ငွေရွှင်နေပါက ပြည်သူ.အခွန်ငွေကို ဂရုစိုက်ရန် မလိုတော့ပေ။ အခွန်ဖိဖိစီးစီး မကောက်ခံသည့်သကာလ ပြည်သူကလဲ မိမိနည်းမျိုးစုံဖြင့်ရှာဖွေသမျှ အစိုးရမှ မထိသဖြင့် တိုင်းပြည်ဘတ်ဂျက် ဘယ်လိုရှိသည်။ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဏာ ဘယ်လိုသုံးသည် စသည်ဖြင့် စောင့်ကြည့်ဂရုမူခြင်း မပြုတော့ပေ။ ထိုအနေအထားသည်ပင် ပျက်စီးခြင်းလမ်းစ ဖြစ်လာသည်။
အစိုးရသည် ပြည်သူက တစ်ချိန်တွင် စောင့်ကြည့်လာမည်ကို မလိုလားတော့သဖြင့် ပြည်သူကိုအခြေခံသည့် လူမှုအဖွဲ.အစည်းများ ပေါ်ပေါက်တည်ရှိခြင်းကို စတင်နှိပ်ကွပ်လာသည်။ ပြည်သူက ပွင့်လင်းမှုနှင့် အခြားအခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုလာပါက ချေမှုန်းနိုင်ရန် သယံဇာတ၀င်ငွေဖြင့် စစ်အင်အား တို.ချဲ.လာလေသည်။ ပဋိပက္ခမီး အချိန်မရွေး ထတောက်နိုင်သည့် အနေအထားကို သဘာဝ သယံဇာတက ဖန်တီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေရှည်တွင်မူ အစိုးရက အရာအားလုံးကို ချုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အာဏာရှင် ဖြစ်သွားပြီး ပြည်သူက အာဏာရှင်ပြုသမျှ နုရလေတော့သည်။ စိန်ထွက်သော ဇင်ဘာဘွေသည် အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။
အခြားဖြစ်နိုင်ချေမှာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ.အစည်း တစ်ခုခုကလဲ ဒေသတွင်းရှိ သယံဇာတများကို ထိမ်းချုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားလာခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်ရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ အင်ဂိုလာ၊ နိုင်ဂျာမြစ်တစ်ဝှမ်းနှင့် ဆူဒန်တောင်ပိုင်းတွင် အဆိုပါ အဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ဖူးသည်။ ထိုအနေအထားတွင် သယံဇာတမှ ရသောဝင်ငွေသည် နှစ်ဖက်လုံးအတွက် လက်နက်ရိက္ခာ ပံ့ပိုးပေးလေသည်။ နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတမှ ရသောဝင်ငွေဖြင့် ကျည်ဆံလှိုင်လှိုင် ၀ယ်နိုင်သောကြောင့် နှစ်ဖက်ပြည်သူတို. သေကြလေသည်။ တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် အခြေခံအဆောက်အအုံတို. ပျက်စီးပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက အခွင့်အရေး ယူကြလေသည်။
တိုင်းပြည်သယံဇာတနှင့် ပက်သတ်ပြီး Macro Economy ပိုဆန်သည့် သုံးသပ်ချက်မှာ ဟော်လန်တို.ကို လေ့လာရာမှ ရလာသည်။ ၁၉၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ. အမြောက်အများ တူးဖော်တွေ.ရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာသို. အကြီးအကျယ် တင်ပို.ရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ သို.ရာတွင် နိုင်ငံ၏ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကို ထိမ်းညှိမြှင့်တင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ရေရှည်တွင် ဆိုးကျိုးကြုံရလေသည်။
၀င်ငွေကောင်းလာသောကြောင့် အစိုးရက ငွေသုံးကြမ်းလာပြီး ပြည်တွင်းငွေဖောင်းပွခြင်း၊ လုပ်သားရွှေ.ပြောင်းခြင်း၊ လုပ်အားခမြင့်တက်လာခြင်းတို.ပါ ထပ်ဖြစ်လာသည်။ ကုန်ဈေးနှုန်းများ တက်လာပြီး ကုန်ကြမ်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် ကြီးမြင့်လာသည်။ သို.သော် နိုင်ငံတကာဈေးနှုန်းအတိုင်း ရောင်းချရသည့် ပြည်ပပို.ကုန်များမှာမူ ဈေးတင်ရန် မဖြစ်နိုင်ဘဲ နှုန်းသေ ဖြစ်နေရလေသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် သယံဇာတ တင်ပို.ရောင်းချခြင်းမှ တိုင်းပြည်၏ Export Earning တိုးလာသဖြင့် ဒတ်ခ်ျငွေကြေးမှာမူ ခိုင်မာနေသည်။
ဒတ်ခ်ျငွေဈေးမာနေခြင်း၊ ကုန်ထုတ်စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းတို.ကြောင့် နယ်သာလန်ထုတ်ကုန်များသည် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု နည်းပါးသွားလေသည်။ ရလာဒ်အဖြစ် သဘာဝဓာတ်ငွေ.မှလွဲ၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာပို.ကုန် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး မျက်ဖြူဆိုက်ခဲ့ရသည်။ ထိုအဖြစ်ကို “ဒတ်ခ်ျရောဂါ (Dutch Disease)” ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်များက သမုတ်ကြပါ၏။
ထိုအချိန်က နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်း အပြည့်အ၀ရှိသည့် လူထုအခြေခံအဖွဲ.အစည်းများ၊ ပွင့်လင်းသည့်မီဒီယာများ ရှိနေပြီးဖြစ်သည့်အပြင် နိုင်ငံရေးစံနစ်ကလဲ တည်ငြိမ်ခိုင်မာပြီး အုပ်ချုပ်သူများကလဲ တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်သည့် အရည်အသွေးပြည့်အစိုးရ ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာ ဟော်လန်တို. မျက်ဖြူဆိုက်ရုံသာဆိုက်ပြီး ပျက်စီးခြင်းသို. မဆိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအနေအထားတွင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ ခြစားမှုတို.သာ ထပ်ပေါင်းလိုက်ပါက နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ ရေနံတွေ.သကဲ့သို. ဖြစ်လာမည်မှာ မလွဲမသွေဖြစ်ပေသည်။
၁၆ ရာစုအစမှ ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းအထိ အင်အားကောင်းခဲ့သော စပိန်အင်ပါယာကြီးသည် ၄င်း၏ နောက်ဆုံးနှစ်ငါးဆယ်အတွင်း စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှ မရှုံးခဲ့ဘဲ ပြိုကွဲခဲ့ရသည်။ ကိုလိုနီနယ်များမှထွက်သော သယံဇာတများကိုသာ မှီခိုခဲ့ပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို အားမပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရှေ.ဥရောပတစ်ခြမ်း အပါအ၀င် ကမ္ဘာတစ်ဝက်နီးပါး အာဏာလွှမ်းမိုးခဲ့သော ဆိုဗီယက်အင်ပါယာကြီး နောက်ဆုံးနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်အတွင်း စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှ မရှုံးခဲ့ဘဲ ၁၉၈၉ တွင် ကျဆုံးရသည်။ ရေနံသယံဇာတမှ ရငွေကို မှီခိုပြီး ဆိုရှယ်လစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှ ၀ယ်သူမရှိသည့် ထုတ်ကုန်များကိုသာ ထုတ်လုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်၏။
နိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိုးရသည် သယံဇာတအပေါ် မှီခိုလွန်းပြီး စက်မှုလက်မှုနှင့် လယ်ယာထွက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ၀ါဒဖြန်.ကောင်းရုံ လုပ်ဆောင်နေပါက ပြည်သူနှင့်နိုင်ငံတကာကို ခဏသာ ညာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စူပါပါဝါနိုင်ငံများသည်ပင် အခြေအနေကို ရေရှည်တွင် ဖုံးမနိုင်ဖိမရ ဖြစ်လာကြပြီး တိုင်းပြည်ကို သုညမှ ပြန်စရခြင်းမျိုးရှိသည်။
သင့်သလို ဆင်ခြင်ပြီး တော်သလို ဆောင်ရွက်ကြပါတော့
သဗ္ဗုရိသအပေါင်း အိုသူတော်ကောင်းတို. … ။ ။
၂၀၁၀ အောက်တိုဘာ ၃။
Posted by KoKyawZwa at 8:52 AM 1 comment: Links to this post
သျှရီ နမောဗုဒ္ဓာဿ ...
သက္ကရစ် ၂၀၁၀ ခု၊ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်၊ စက်တင်ဘာလဆန်း ၉ ရက်၊ စနေနေ.။
ဆိုင်းဆရာ ရွာစားကြီးမြေး၊ အညာသား၊ သည်းသည်းလှုပ်ကျော်ဇွ။
မီးပျက်သောဆင်းရဲ၊ ရေမလာသောဆင်းရဲ၊ အင်တာနက်လိုင်း နှေးကွေးသောဆင်းရဲ၊ လိုင်းဖုန်းများပျက်၍ မိုဘိုင်းလ်များ ဆားဗစ်မမိသောဆင်းရဲ၊ ဧည့်စာရင်း ပုံမှန်တိုင်ရသောဆင်းရဲ၊ လက်ဖက်ရည်ဖိုးလဲပေးရ အဟောက်လဲခံရ၍ အကုသိုလ် များရသောဆင်းရဲ၊ ဘတ်စ်ကား/ရထား အချိန်မမှန်သောဆင်းရဲ၊ လမ်းပျက်/မြောင်းပိတ် မိုးရွာတိုင်း စိတ်ညစ်ရသောဆင်းရဲ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ အလှုငွေခွဲတမ်းချတိုင်း ပေးရကမ်းရသောဆင်းရဲ၊ အစိုးရကိစ္စ ကြုံကြလေတိုင်း တစ်မေ့တစ်မောစောင့်ရ ဒုက္ခတွေပိုရသောဆင်းရဲ၊ အသက်မွေးမှုအတတ်ပညာ တစ်ဖက်ကမ်းခပ် တတ်ပါသော်လည်း စစ်ဗိုလ်တွေ ဘီပိုးတွေ. အရပ်ဖက်သို. ရွှေ.လာကြသဖြင့် လေ့လာထားသမျှ သုံးခွင့်မရ ပညာရှင်က အခိုင်းပြန်ခံရသောဆင်းရဲ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသံရုံး ကိုယ်ပြန်မုန်းရသောဆင်းရဲ၊ ရိုးသားချင်သော်လည်း ထမင်းမ၀၍ ခိုးရဖွက်ရ အနိုင်ကျင့်ရသောဆင်းရဲ၊ ရိုးရိုးသားသား ဆိုင်ဖွင့်စားသော်လည်း မီးသတ်ကိုအားကိုးမရ ဈေးမီးလောင်တိုင်း စီးပွားပျက်ကြရသောဆင်းရဲ၊ ကြံ့ဖွတ်အလံထောင်မှ အလှုအတန်းလုပ်ခွင့်ရသောဆင်းရဲ၊ ကဗျာ/ဘလော့ရေး၍ အဖမ်းခံရသောဆင်းရဲ၊ မသာချပေး၍ ထောင်ကျရသောဆင်းရဲ၊ စစ်ဗိုလ်နှင့်ရန်ဖြစ်၍ သေနတ်နှင့်အပစ်ခံရသောဆင်းရဲ၊ ဟိုဆင်းရဲ ဒီဆင်းရဲ၊ ဤသို.ကစသော အတိုင်းမသိသော ဆင်းရဲတို.သည် နှိက်စက်သော မြန်မာပြည်၏ လက်ရှိအာဏာရှင်စံနစ်ကို စွန်.ထားခဲ့၍ . . .
စည်းကမ်းရှိသော၊ ဒီမိုကရေစီပြည့်ဝသော၊ ဘွဲ.ရတစ်ယောက် ဖြစ်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူနိုင်သော၊ အလုပ်လုပ်နေသမျှ ထမင်းဝသော၊ ကိုယ့်အစိုးရအတွက် ကိုယ်ဂုဏ်ယူရသော၊ ပြည်သူ.ဘဏ္ဍာနှင့် တံတားဆောက်ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောစရာမလိုသော၊ ကိုယ့်စစ်တပ်နှင့်ရဲ ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ပေးမှာပဲဟု ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သော၊ သတင်းများကို သတင်းစာတွင်ဖတ်နိုင်သော၊ ဆင်းရဲခြင်း ခပ်သိမ်းကင်းသော၊ ချမ်းသာစွာသော မြင့်မြတ်သော ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစံနစ်ကို ငါလိုသတည်းဟူ၍ ရွှေငွေကစသော ဥစ္စာတို.ကိုစွန်.၍ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီးတွင် ပါဝင်နိုင်ရန် မှတ်ပုံတင်ကြေး ငါးသိန်းကို ငါပေးသွင်း၏။
ဤသို.လျှင် ငါပေးသွင်းသော မှတ်ပုံတင်ကြေးကို အဆုံးမခံရစိမ့်သောငှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ အတင်းအကျပ် တိုင်းသိပြည်သိ အတည်ပြုအပ်သော နာဂစ်ဖွဲ.စည်းပုံကြီးကို ငါလက်ခံခဲ့၏။ ဤငါပြုသော ကောင်းမှုအကျိုးကို ခပ်သိမ်းသော အစိုးရသော ရေမြေ့သခင်ဖြစ်သော တပ်ချုပ်ကြီးလည်း ရစေ၏။ ကြိုင်ကြိုင်အစ၊ ဖိုးလပြည့်အဆုံး ဒင်းတို.တစ်မိသားစုလုံးလဲ ရစေ၏။ အဖိုးကြီး၏ မောင်းမမိသံများနှင့် တစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံးနှင့် နအဖ တစ်ဖွဲ.လုံးလည်း အချင်းချင်း အမျက်အဤ တစ်စေ့မရှိ ချစ်သောမျက်စိဖြင့် ရှုကြရစေ၏။ ဤကောင်းမှု အာနုဘော်ဖြင့် ပြည်တိုင်းကား ခပ်သိမ်း၌နေသော ကြံ့ဖွတ်အပေါင်းတို.သည် အစီးအပွားကိုရှာလျှက် သက်တော်ရှည်စွာ နေကြ၍ ဤကောင်းမှုကို ထောက်ပံ့စေသတည်း။
ယခုရွေးကောက်ပွဲဝင်သော၊ နောင်ဖြစ်လတ္တံသော အမတ်မင်းအပေါင်းတို.သည်လည်း ကောင်းမှုအကျိုးကို ရစေသတည်း။ တင်ထားသမျှ မှတ်ပုံတင်ကြေးများ အမြန်ဆုံး အရင်းကျေစေသတည်း။ ကတိပေးထားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အဆင်ပြေစေသတည်း။ အရအမိကို လိုသောသူကား အရအမိ ရစေသတည်း။ ကောင်းမှုကို လိုသူကား ကောင်းမှုကို ရစေသတည်း။
ငါလည်း အလှုခံထွက်တိုင်း တရားစွဲခံရသော၊ စည်းဝေးမဲဆွယ်ချင်တိုင်း လျှောက်လွှာတင်ရသော၊ ငါးသိန်းမရှိ၍ နောက်ဆုတ်ရသော၊ လက်တွဲချင်သည့် အမတ်လောင်းမရှိ၍ တစ်ပါတီလျှင် နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်း ၀င်ပြိုင်ရသော၊ အခွင့်ထူးခံကြံ့ဖွတ်ကို မနာလိုဖြစ်ရသော၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာချင်းအတူတူ အိမ်ဖြည့်သာသာဟု အပြောခံရသော၊ အမတ်ဖြစ်ချင်၍ သမိုင်းကွေးရသော အမတ်လောင်းမျိုး မဖြစ်မူ၍ ပိုက်ဆံချေးပြီး စည်းရုံးနိုင်သော၊ အာဏာပြပြီး စည်းရုံးနိုင်သော၊ ဘတ်ဂျက်တောင့်သော၊ ဟိုတယ်မှာတည်းပြီး စည်းရုံးနိုင်သော၊ ဌာနဆိုင်ရာမှာ မိန်.ခွန်းပြောရင်း စည်းရုံးနိုင်သော၊ ရုံးခန်းဌားခ ပူစရာမလိုသော၊ အလှုငွေထည့်ချင်သူ ပေါသော ကျေးဇူးတို.နှင့် ပြည့်စုံပြီးလျှင် ပါလီမန်၌ ကျင်လည်၍ အမတ်လောင်းဘ၀မှ အမတ်မင်းဘ၀သို. အမြန်ဆုံး ရောက်စေသတည်း။
ငါရေးထိုးအပ်သော အမတ်လောင်းကျောက်စာကို မလိုတမာစိတ်ထား အမုန်းပွားပြီး ဆဲဆိုအံ့။ မကောင်းသောကွန်မန်.ပေးအံ့ ...
အကြင်သူသည် ယခုဘ၀မှစ အရိမေတ္တရမြတ်စွာဘုရားပွင့်သည်အထိ သံသရာ၌ အမတ်မင်း မဖြစ်ရစေ။ ။
(မူရင်းကျောက်စာ မိဖုရား ဖွားစော နှင့် သိင်္ဃသူ.သမီး)
Posted by KoKyawZwa at 8:48 AM No comments: Links to this post
သို. ... ဖေဖေနဲ. မေမေ
မွေးနေ.ပွဲနီးလာတဲ့ ကာလတိုင်း တစ်သက်တာလုံးရဲ. ပထမဆုံး မွေးနေ.လက်ဆောင်ကို အသက် ၇ နှစ် ပြည့်တဲ့နေ.မှာ ရခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိနေတယ်။ ဖေဖေနဲ.မေမေက ပေးခဲ့တာ။
အဲဒိနေ.က အဖြစ်အပျက်လေးကို အခုအချိန်ထိ အသေးစိတ် အမှတ်ရနေတုန်းပဲ။
သားကြီးမွေးနေ. အထိမ်းအမှတ် ဟင်းကောင်းတွေ ချက်ထားတဲ့ မိသားစုသုံးယောက်စာ ထမင်းစားပွဲခုံပုလေးမှာ မိသားစုအားလုံး ဆုံကြတဲ့အခါ "သားကြီး မျက်လုံးမှိတ်၊ လက်ဝါးဖြန်."လို. မေမေက ပြုံးပြီး ပြောတော့ တစ်ခုခု ပေးတော့မယ်လို. သိလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့ မျက်လုံးတွေကို တိတ်တိတ်ဖွင့်ပြီး ခိုးကြည့်ဖို.တောင် သတိမရခဲ့မိဘူး။ လက်ထဲကို တစ်ခုခု ထည့်ပေးလိုက်တာ ခံစားရလို. မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့မှ ဘာလဲဆိုတာ မြင်လိုက်ရတာ။
စာအုပ်လေးနှစ်အုပ် ... ... ထူထူလေးတစ်အုပ်၊ ပါးပါးလေးတစ်အုပ် ... အပြာရောင်တစ်အုပ်၊ အ၀ါရောင်တစ်အုပ်။ ကတ်ထူစက္ကူရယ် ဖလင်ပြားရယ်သုံးပြီး တစ်ခါတည်း အဖုံးပါဖုံးထားတယ်။ တစ်အုပ်က သာလွန် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အိပ်ဆောင် အဘိဓာန်စာအုပ်၊ နောက်တစ်အုပ်က မြန်မာစာအဖွဲ.က ထုတ်တဲ့ အလိမ္မာပုံဝတ္ထုများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်။ အတွင်းအဖုံး စာမျက်နှာတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ကို ရေးပေးထားတယ်။ နာမည်အောက်မှာ ၁၂-၁၂-၁၉၈၇ ဆိုတဲ့ ရက်စွဲကိုပါ ထိုးပေးထားသေးတယ်။ အားလုံး ဖေဖေ့လက်ရေး။
ဖေဖေ့လက်ရေးက ဘုန်းကြီးကျောင်းသား လက်ရေးစစ်စစ်။ ညီညာဝိုင်းစက်နေတယ်။ ၆ တန်းကျောင်းသား အရွယ်အထိ စာအုပ်အဖုံးတွေပေါ်မှာ အမည် အတန်း ဘာသာ ကျောင်း ဆိုတဲ့ နာမည်စာတမ်းတွေ ဖေဖေရေးပေးတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက မင်းအဖေ နာမည်ထိုးပေးတာ အရမ်းလှတယ်ကွလို. ပြောကြတယ်။ ဖေဖေ့လက်ရေးလို တူအောင် ရေးနိုင်ဖို. ကြိုးစားကြည့်ဖူးတယ်။ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေက ကန်.ကူလက်လှည့်ဆရာ ဖြစ်ခဲ့လို.လားတော့ မသိပါ။ လက်ရေးလှတယ်လို. အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ ကျောင်းသား စာရင်းထဲမှာတော့ ကိုယ်ပါခဲ့တယ်။ ဖေဖေက အားလုံးသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ဖေဖေစာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကာလတွေကို မှတ်မိနေသေးတယ်။ အဲဒိအချိန်က ကစားချင်ရင် စာအရင်လုပ်ရတယ်။ မုန်.စားချင်ရင် စာဆိုပြရတယ်။ တစ်ခုခု ပူဆာချင်ရင် စာတွေအားလုံး ကြိုတင် ကျက်ထားရတယ်။ “ဖေဖေ၊ ရေခဲချောင်း စားချင်လို. ပိုက်ဆံငါးမူးပေးပါ”လို. တောင်းတဲ့အခါတိုင်းမှာ “မြန်မာနိုင်ငံသား မီးပုံးပျံသူရဲကောင်း နာမည် ဘယ်သူလဲ၊ မှတ်မိလား”ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး ဖေဖေအမြဲ ပြန်မေးတတ်ပါတယ်။ “မီးပုံးပျံဦးကျော်ရင်”လို. အဖြေပေးနိုင်ရင်တော့ ရေခဲချောင်းစားဖို. အခွင့်အရေး အမြဲရတတ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ဖေဖေပေးတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ရပိုင်ခွင့်တွေတိုင်းမှာ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ကျေပွန်မှု ဆိုတဲ့ ၀တ္တရားတစ်ခု အမြဲကပ်ပါနေတတ်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အခွင့်အရေးရဖို. ကိုယ့်တာဝန်ကို ကိုယ်အရင်ကျေရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ဖေဖေ ရိုက်သွင်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရပိုင်ခွင့်တွေ ရလာဖို. မိမိအလုပ်ကို မိမိလုပ်ရမယ်။ ကျောင်းသားအတွက် ကျောင်းစာဟာ နံပါတ်တစ်ပဲလို.လဲ ဖေဖေအမြဲပြောတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် စနေ-တနင်္ဂနွေ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ. အရုပ်ပစ်ချင်တဲ့အခါ နေ.လည်ခင်း နေပူချိန်မှာ ဖေဖေနဲ. စာလုပ်ရပါတယ်။
အဲဒိအချိန်က မိသားစုသုံးယောက် နေခဲ့ရတဲ့ ခနော်နီ ခနော်နဲ. အိမ်လေးရဲ. ခေါင်းရင်းဖက်နံရံမှာ ကျောက်သင်ပုန်းတစ်ချပ် ချိတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ သင်ပုန်းအပေါ် ဓနိမိုးအပေါက်က မိုးယိုလို. ကျောက်သင်ပုန်းရဲ. အပေါ်ပိုင်း ညာဖက်ထောင့်မှာ အထပ်သားပွပြီး စာရေးလို.မရတာတောင် မှတ်မိနေသေးတယ်။ ကျောက်သင်ပုန်းအောက်က ကြမ်းပြင်မှာ ယုန်ပုံလေးပါတဲ့ ဖိုးလမင်းတံဆိပ် မြေဖြူဗူး တစ်ဗူးရှိတယ်။
အိမ်မှာ ဆက်တီမရှိတဲ့အတွက် သင်ဖြူးဖျာခင်းထားတဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဖေဖေကထိုင်တယ်။ ကျနော်က ကျောက်သင်ပုန်းရှေ. မတ်တပ်ရပ်ရင်း ဖေဖေနှုတ်က တိုင်ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အဲဒိသင်ပုန်းပေါ်မှာ မြေဖြူနဲ. ရေးပြရတယ်။ မေ့နေတဲ့အခါ ဖေဖေက ထောက်ပေးတယ်။ မှားနေတာတွေကို ပြင်ပေးတယ်။ မေမေပြင်ဆင်ပေးတဲ့ ဖေဖေ့အတွက် ရေနွေးကြမ်းရယ်၊ သားအဖနှစ်ယောက်လုံးအတွက် ပဲခြမ်းသုတ်ရယ် အနားက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အဆင်သင့် ရှိနေတတ်တယ်။ ပဲခြမ်းသုတ်စားရင်း ခဏနားလိုက်၊ တအောင့်နေရင် စာပြန်လုပ်လိုက်နဲ.ပဲ ညနေစောင်းသွားတာ များတယ်။
အဲဒီလို ကျောက်သင်ပုန်းနဲ. စာသင်ခဲ့တုန်းက သားအဖကြားမှာ တရားဝင် သတ်မှတ်မထားသော်လည်း တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နားလည်မှုတစ်ခု ရှိခဲ့တယ်။ "သားကြီး၊ သေသေချာချာ ဂရုစိုက်နော်၊ ဒီတစ်ခါ လက်ရေးလှအောင်ရေး"လို. ဖေဖေပြောလာပြီဆိုရင် ကျနော်က "ဝေးဟေးးဟေးးးး"လို. ၀မ်းသာအားရ အော်တတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖေဖေကလဲ ပြုံးပြီးကြည့်နေတတ်တယ်။ ဘာလို.လဲဆိုတော့ လက်ရေးလှပြီးသား သားကြီးကို လှအောင်ရေးခိုင်းပြီဆိုရင် သေချာတယ်။ ဒီနေ.အဖို. ဒီတစ်ခေါက်ရေးရတာ နောက်ဆုံးဖြစ်မယ်။ ဒီနေ.အတွက် စာသင်ချိန်ပြီးလို. ကစားချိန်ကို ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လဲ ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးရေးတဲ့စာတွေက သင်ပုန်းပေါ်မှာ မဖျက်မချင်း ရှိနေမှာလေ။ အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တိုင်း ကျောက်သင်ပုန်းကို ကြည့်ပြီး “ခင်ဗျားသား လက်ရေးက ဘယ်ဆိုးလို.လဲဗျ။ တော်တော်လှသားပဲ”လို. ပြောတာကို ဖေဖေရော မေမေပါ ပြုံးပြုံးကြီး နားထောင်ချင်ကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက သားအတွက် ဂုဏ်ယူချင်ကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။ မိဘတာဝန်ကျေအောင် တတ်နိုင်သလောက် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေလည်း အများကြီးထားခဲ့ကြတယ်။
အသက် ၇ နှစ်အရွယ် သားကို စာအုပ်လက်ဆောင် ပေးခဲ့တဲ့ မိဘနှစ်ပါးရဲ. သားသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ. ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ဒီမျှော်လင့်ချက်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံမှုနဲ. ပံ့ပိုးမှုတွေ၊ ဒါတွေကို ပြန်တွေးမိတိုင်း ကြက်သီးဖြန်းဖြန်း ထရတယ်။
မေမေနဲ.ပက်သတ်ပြီးတော့လဲ သတိရနေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ခြံစည်းရိုးမရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းလေးမှာ ကျောင်းတက်ရတုန်းက စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အခါတိုင်း စာမေးပွဲခန်းရဲ. ပြတင်းပေါက်ဝမှာ ကျောင်းသားတွေရဲ. အမေတွေ စုပြုံတိုးဝှေ.နေတတ်ကြတယ်။ သားသမီးမျက်နှာကို ကြည့်ပြီး ဖြေမှဖြေနိုင်ရဲ.လား၊ အချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနေရဲ.လားဆိုတဲ့ ပူပင်သောကတွေနဲ. ကိုယ့်သားသမီးမျက်နှာကို အမေတော်တော်များများ ခြေဖျားထောက် ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒိအမေတွေထဲမှာ ကျနော့်မေမေ အသည်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို. ထင်မိတယ်။ စိတ်ပူနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ. ဖြေပြီးသားစာတွေ ပြန်စစ်ဖို. အချက်ပြနေတဲ့ မေမေ့မျက်လုံးတွေကို အခုထိ မှတ်မိနေသေးတယ်။
ဖေဖေကတော့ စိတ်ပူတာထက် ယုံကြည်မှုက ပိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် စာမေးပွဲရက်တွေမှာ အသွားကို စက်ဘီးနဲ.လိုက်ပို.ပြီး အပြန်မှာ အိမ်ကပဲ စောင့်နေတတ်တယ်။ သူ.သားဘာတွေ ရတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ဘာမရဘူးလဲသိတယ်။ ကျနော် မူလတန်း ကျောင်းသား ဘ၀က ဖေဖေဟာ မေးခွန်းစာရွက်ကို ကြည့်ပြီး သူ.သားကြီး ဘယ်နှစ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာ အနီးစပ်ဆုံး မှန်အောင် အမြဲ ခန်.မှန်းနိုင်ခဲ့တယ်။
မွေးနေ.လက်ဆောင် ရခဲ့တဲ့ အလိမ္မာပုံဝတ္ထုများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးဟာ ကျနော့်ရဲ. စာဖတ်ဝါသနာကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အဲဒိဝါသနာကို ဆက်ပြီးရှင်သန်စေတာလည်း ဖေဖေနဲ.မေမေပါ။ ၇တန်းကျောင်းသား ဘ၀အထိ ရွှေသွေးဂျာနယ်ကို အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလို.ရအောင် အပတ်စဉ် မှာပေးခဲ့တယ်။ စာပေဗိမာန် စာအုပ်အသင်းမှာ အသင်းဝင်ပေးပြီး စာအုပ်ထွက်တဲ့ အခါတိုင်း သွားယူပေးခဲ့တယ်။ ၁၇ နှစ်သား အရွယ်အထိ မြ၀တီဂျာနယ်နဲ. နိုင်ငံတကာရေးရာ ဂျာနယ်တွေကို ရှာဖွေဝယ်ယူပေးခဲ့တယ်။ သတင်းစာတွေ ဖတ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့သားကို စာအုပ်တွေကတစ်ဆင့် နိုင်ငံတကာနဲ. ထိတွေ.ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ဖေဖေနဲ.မေမေ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ဘွဲ.ရသူတွေ မဟုတ်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ. ပညာရှာနည်းကို သူတို.ကိုယ်တိုင် သင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကို စဉ်းစားမိတိုင်း ကျနော့်မှာ အံ့သြရပါတယ်။
ကိုးတန်းကျောင်းသားဘ၀က တပ်မတော်နေ. ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအဆင့် ဒုတိယရတော့ ကျောင်းက ကျနော်အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲ လုပ်ပေးပါတယ်။ အဲဒိပွဲမှာ ကျနော်က အခုဆုကို ကျနော်မယူပဲ ကျနော့်ဖေဖေ တက်ယူသင့်ပါတယ်လို. ပြောတော့ ဖေဖေနဲ.မေမေအပါအ၀င် ပရိသတ်အားလုံး ၀ိုင်းရယ်ခဲ့ကြတာ အခုထိ မှတ်မိနေဆဲပါ။
တကယ်တော့ အဲဒိအချိန်က ကျနော်ပြောခဲ့တာ ဟာသအနေနဲ. မဟုတ်ခဲ့ပါ။
ကျနော့်ဖေဖေနဲ. မေမေသာ သာမန်မိဘတွေဖြစ်ခဲ့ရင် ကျနော့်မှာ အဲဒိလောက် လုပ်နိုင်စရာ အခြေအနေမျိုး ရှိလာနိုင်ဖို. မလွယ်လှပါ။
ဒါကို ကျနော်သာ အသိဆုံးပါ။
အခုအချိန်မှာ သားရရှိပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရနေတာတွေ အားလုံးအတွက် … … ကျေးဇူး အထူးပါ။ ။
Posted by KoKyawZwa at 2:07 AM 10 comments: Links to this post
"စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်း ဘက်စုံဖွံ.ဖြိုးတိုးတက်အောင် … … ..."
ကျွန်တော်တို. တိုင်းပြည်၏ ၀ါဒဖြန်.ချီရေး လှိုင်းတံပိုးအောက်မှ အစိုးရ၏ စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်းများမှာ တောင်သူလယ်သမားများအတွက် နိဗ္ဗါန်ဘုံသို.၀င်ခွင့်လော၊ ပျားရည်ဆမ်းသောဓားသွားလော ဆိုသည်ကိုတော့ ကျွန်တော်အလေးအနက် စဉ်းစားနေမိပါတော့သည်။ ။
(ယခုစာစုကို နှစ်သက်ပါလျှင် Jeffrey D. Sachs ၏ The End of Poverty ကို ဖတ်ပါ။ မူရင်းအတွေးကို ထိုစာအုပ်မှ ရပါသည်။)
Posted by KoKyawZwa at 3:46 AM6comments: Links to this post
ငါသည်မင်းအပေါင်းတို.၏ ဧကရာဇ် ဖြစ်သည်
အိုဇမန်ဒိုင်းယက်စ် ကဗျာလေးဟာ အင်္ဂလိပ်စာဒုတိယနှစ် တက်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ပီဘီရှယ်လီ ရဲ. အကောင်းဆုံး လက်ရာတစ်ခုပါ။ ကျောင်းမှာသင်တုန်းက သိပ်နားမလည်လို. ရင်းနှီးတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ဆီကို သွားမေးတော့မှ ဒီကဗျာလေးရဲ. ဆိုလိုရင်းကို သေသေချာချာ သဘောပေါက်တာပါ။ ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်ကို ပိုနားလည်လေ ဒီကဗျာလေးကို ပိုစွဲလမ်းမိလေပါ။
အနောက်တိုင်းသား ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဆန်တဲ့ သင်္ခါရသဘောတွေကို တွေးပြီး ရေးတတ်တာကို တော်တော်အံ့သြ လေးစားမိတယ်။ ပီဘီရှယ်လီဟာ ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ယောက်ရဲ. သားဖြစ်ပေမယ့် သြဇာအာဏာ၊ ခြွေရံသင်းပင်း၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ. ရာထူးအရှိန်အ၀ါ စတဲ့အရာတွေရဲ. မတည်မြဲမှုနဲ. လောကဓံတရားရှစ်ပါးရဲ. သဘောသဘာဝကို ဆင်ခြင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဒာကိုယ် အပေါ်ပိုင်း မရှိတော့တဲ့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းပုံ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြီး ကန္တာရထဲမှာ ရှိနေကြောင်း ပြန်ပြောပြခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းမြို.ပျက်ကြီးတစ်ခုက ခရီးသွားတစ်ယောက်နဲ. ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်း ပီဘီရှယ်လီက ကဗျာအစမှာ ပြောထားပါတယ်။ အနားက သဲပြင်မှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နစ်မြုပ်နေတာကတော့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ရဲ. ယိုယွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ မျက်နှာပိုင်းပဲ ဖြစ်ပါသတဲ့။ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ရဲ. ထီမထင်တဲ့နှုတ်ခမ်းအစုံနဲ. မျက်မှောင်ကြုံ.ထားတဲ့ မျက်နှာပေးဟာ ထုဆစ်သူ ပညာရှင်အနေနဲ. ကိုယ်ဟန်ပြနေသူရဲ. စိတ်နေသဘောထားကို နားလည်ကြောင်း ဖော်ပြလို.နေပါတယ်။
ငါ၏အမည် အိုဇမန်ဒိုင်းယက်စ် ဟုခေါ်သည်။ မင်းအပေါင်းတို.၏ဘုရင် ဧကရာဇ်ဖြစ်သည်။ ငါ၏ သြဇာပြည့်ဝသည့် ခန်.ညားဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်လော့ … လို.အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စာသားတွေကို ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြီးရဲ အောက်ခံခုံမှာ ထွင်းထုထားပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ယိုယွင်းနေတဲ့ ကျောက်ဆစ်ရုပ်ကြီး အနားမှာ ဟာလာဟင်းလင်း သဲကန္တာရကြီးကလွဲလို. ဘယ်အရာမှ မကျန်ရစ်တော့တဲ့အကြောင်းကို နောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာ ပြောပြရင်း ကဗျာလေးကို အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်စေ ပျက်စီးတတ်တဲ့ သင်္ခါရတရားကို လွန်ဆန်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပီဘီရှယ်လီက အိုဇမန်ဒိုင်းယက်စ်ကို ဥပမာထားပြီး ပြောချင်တာလို. ထင်ပါတယ်။
အိုဇမန်ဒိုင်းယက်စ်ဟာ ရှေးဟောင်း အီဂျစ်နိုင်ငံတော်ရဲ. ဆယ့်ကိုးဆက်မြောက် ဖာရိုးမင်းဆက်မှာ တတိယမြောက် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး အီဂျစ်နိုင်ငံသမိုင်းတွင် သြဇာအာဏာအကြီးဆုံး ဖာရိုးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ User-maat-re Setep-en-re ဆိုတဲ့ ဘွဲ.အမည်နဲ. ရာစုနှစ်တစ်ခုနီးပါး နန်းစံခဲ့သူပါ။
အိုဇမန်ဒိုင်းယက်စ်လို ရာဇာတကာတို.ရဲ. ဘုရင် မင်းအပေါင်းတို.ရဲ. ဧကရာဇ်သည်ပင်လျှင် သူရဲ.သြဇာအာဏာကို ကမ္ဘာတည်သရွေ. တည်တံ့အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ အာဏာတွေ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို မက်မောပြီး လောဘ၊ ဒေါသတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သံဝေဂယူစေချင်ပါတယ်။ မတည်မြဲတဲ့ အနိစ္စတရားနဲ. ဆင်ခြင်တတ်မယ်ဆိုရင် အစိုးမရတဲ့အရာတွေအတွက် ပြုလုပ်မိနေတဲ့ ဒုစရိုက်တရားတွေကနေ ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ။
(မှတ်ချက်။ ။လေးစားရသော ဆရာတစ်ဦးက အသံထွက်အမှန်မှာ အိုဇမန်ဒီယာ့စ် ဖြစ်ကြောင်းပြင်ပေးထားပါသည်။ မူရင်းကဗျာကို ခံစားနိုင်ဖို. အောက်တွင် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။)
Posted by KoKyawZwa at 2:21 AM No comments: Links to this post